इतिहास धमिलो बनाउँदै देउवा, प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै दुई दर्जनलाई बाँडिसके मन्त्रालय !
ARCHIVE, COVER STORY, NEWSPAPER » इतिहास धमिलो बनाउँदै देउवा, प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै दुई दर्जनलाई बाँडिसके मन्त्रालय !
लोकमान कार्की जस्तो सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्ने निरंकुशताको हिमायति र भ्रष्टचारीलाई संरक्षण दिएका बिबादस्पद अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई महाभियोग लगाउँदा समर्थन गर्न नसकेर अनिर्णयको बन्दी बनेका कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो जीवनभरको लक्ष्य नैं प्रधानमन्त्री पदलाई मात्र बनाउँदा कांग्रेस मात्र होइन मुलुकमा आएका पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन नैं उल्टिने खतरा भएको छ । विसंगति र बिकृतिका खानीको रुपमा पहिचान बनाएका देउवाले पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा देखाएको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप, न्यायलयको फैसला बिरुद्ध पुनरावेदन दिनुको सट्टा फैसलाबिरुद्ध पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्णय गरेर बिष बमन गर्ने र प्रधानन्यायाधिश बिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने जस्ता गैरलोकतान्त्रिक, अलोकप्रिय र खराव आचरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
यता नेता रामचन्द्र पौडेलले आनन्द्र प्रसाद ढुंगाना, महेश आचार्य र डा. शेखर कोइरालालाई मन्त्रीमा सिफारिस नगर्ने पक्का भएको छ । उनले सहमहामन्त्रीमा बलबहादुर केसीको नाम सिफारिस गर्न खोजेपनि सभापति देउवले रुचाएका छैनन् । केसीको सट्टामा पौडेलले महामन्त्रीको लागि दिलेन्द्रप्रसाद बढूको नाम सिफारिस गरेका छन् । तर देउवा एउटै अञ्चलबाट दुई पदाधिकारी राख्नु उचिन नहुने भन्दै बरु एउटा बिभाग वा मन्त्री पथ थप गरिदिने भन्दै पौडेललाई ललिपपको आकर्षक प्रस्ताव अघि सारेका छन् । नेता पौडेल उनकै ललिपपमा रमाउने भएका छन् ।
त्यसको सट्टामा देउवा मानबहादुर विश्वकर्मा वा बालकृष्ण खाँडमध्ये एकलाई सहमहामन्त्री बनाउन खोजिरहेका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।